[Monday, December 3rd, 12] :: Denmark oo Dijital ku shaqaynaysa
Kobenhagen RH: Laga bilaabo1da diisanbar deenishku keligood ayay si ballaadhan u qabsan doonaan danaha ay ka leeyihiin xafiisyada dawladda.
Hadda wixii ka danbeeya waxa meesha laga saari doonaa kayuuyada xarumaha dawladda hoose, iyagoo la adeegsan doono kombuyuutarrada lagu haysto guryaha, halkaasoo laga buuxsan doono foomamka la xidhiidha guuritaanka, kaadhka cusub ee caafimaadka, lagana codsan karo xarumaha dharaartii lagu hayo carruurta, lagana qori karo carruurta dugsiyada.
Arrintani waxay bilaw u tahay isbeddel wayn oo lagu sameeyay xidhiidhka dadwaynaha iyo xafiisyada dawladda, oo in badan oo ka mid ah laga dhigayo dijital.
Yoolku waa in boqolkiiba 80 ay dadwaynuhu kula xidhiidhaan meelo badan oo xafiisyada dawladda ah qoraallo dijital ah sannadka 2015.
Borofisarad ayaa ka digtay
Laakiin dadwaynuhu waxay halis ugu jiraan, in laga khiyaameeyo xuquuqdoodii, ayuu digniin ku bixisay borofisarad ku takhasusay sharciyada arrimaha bulshada:
- Haddii qofka cidi ku qaabisho xafiiska, waxa markaas laga la talinayaa xuquuqihiisa. Waxase imminka wixii ka danbeeya aan ka cabsanayaa, in dadwaynaha si fiican loogu tilmaami waayo xuquuqihiisa - taasina way dhacaysaa, marka waxyaabo badan laga buuxinayo netka, ayay DR Nyheder ku tidhi Kirsten Ketscher.
Tajumaada : Axmed Aw Diiriye